အဗ္ဗဒွတ်စ် ဆလာမ် (ပါကစ္စတန်) - ရူပဗေဒဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆု ၊ ၁၉၇၉ - News @ M-Media
အဗ္ဗဒွတ်စ် ဆလာမ် (ပါကစ္စတန်) – ရူပဗေဒဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆု ၊ ၁၉၇၉
in ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ — October 10, 2012
အောက်တိုဘာ၊ ၁၀၊ ၂၀၁၂
” မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကို မြော်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျုပ်တို့ ပါကစ္စတန်မှာ ဆလာမ်နောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာ မြူမှုန်လောက်ရှိတဲ့အရိပ် အယောင်တောင် မတွေ့ရတော့ပါ။ ” (usa အခြေစိုက် pakistanlink သတင်းစာ၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်)
မွေး – ၁၉၂၆ ဇန်န၀ါရီလ ၂၉
မွေးဖွားရာနေရာ – ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ၊ ဂျန်းဒေသ
ကွယ်လွန် – ၁၉၉၆ နိုဝါဘာလ ၂၁
လူသိများရသည့်အကြောင်းရင်း – အီလက်ထရို ၀ီက် သီအိုရီ (electro weak theory) ၊ အိုင်းစတိုင်း-၀ိုင်းဘဂ်-ဆလာမ် သီအိုရီ (Einstein-Weinberg-Salam theory ) များအပါအ၀င် အခြားသော ရူပဗေဒ၏ သီအိုရီပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ နူးကလီးယား ဖခင်ကြီး ။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသား ၊ နူးကလီးယားဆိုင်ရာ ရူပဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၁၉၇၉ တွင် စတီဗင်ဝိန်းဘာဂ်နှင့် ရှယ်လ်ဒန်လဲ ဂလက်စဂိုတို့ နှင့်အတူ ” အီလက်ထရို ၀ီက် သီအိုရီ ” ကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့မှုကြောင့် နိုဘယ်ဆုရရှိခဲ့သည်။ ထိုသီအိုရီက အီလက်ထရိုမဂ်နီတစင်မ် ဟုခေါ်သည့် လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများ နှင့် အင်အားနည်း နူးကလီးယားစွမ်းအင်တို့ ပူးပေါင်းခြင်းသဘောတရားကို ရှင်းပြသည်။
Prof. Dr Abdus Salam ၏ CV အပြည့်အစုံကိုhttp://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1979/salam-cv…. တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ဆလာမ်သည် လာဟိုရ်မြို့ အစိုးရကောလိပ်တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ၁၉၅၂ ခုနှစ်၌ ကိန်းဘရစ်ဂ်ျ တက္ကသိုလ်မှ သီအိုရီပိုင်းဆိုင်ရာ ရူပဗေဒဘာသာရပ်ဖြင့် Ph.D. ဘွဲ့ ရရှိလေသည်။၁၉၅၁ မှ ၁၉၅၄ ခုနှစ်များတွင် ဆလာမ်သည် မွေးရပ်မြေ၌ သင်္ချာပါမောက္ခတာဝန်ကို ထမ်းရွက်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်သို့ပြန်ကာ ကိန်းဘရစ်ခ်ျ တက္ကသိုလ် ၌ပင် သင်္ချာကထိကတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၁၉၅၇ တွင် ယနေ့ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးများထဲတွင် နံပါတ် ၅ နေရာလိုက်သည့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့ တော်ဝင်ကောလိပ် (Imperial College of Science and Technology, London ) တွင် သီအိုရီပိုင်းဆိုင်ရာ ရူပဗေဒပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ထမ်းခဲ့လေသည်။
(ရည်ညွှန်း – http://www.usnews.com/sections/education/worlds-best-universities )
၁၉၆၄တွင် ၊ အီတလီနိုင်ငံ ၊ ထရစ်စတီးမြို့၌ နိုင်ငံတကာ သီအိုရီပိုင်းနှင့်ဆိုင်သော ရုပဗေဒစင်တာတည်ထောင်ရာတွင် founder တစ်ဦး အနေဖြင့် ပါဝင်ခဲ့လေသည်။ ထိုစင်တာက တတိယကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရှိ ရူပဗေဒပညာရှင်များအား ကူညီထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်လေသည်။ ဆလာမ်သည် မိမိကွယ်လွန်ချိန်အထိ ထိုစင်တာ၏ ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့လေသည်။
၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ဆလာမ်သည် လန်ဒန်မြို့ တော်ဝင်ကောလိပ် ( Imperial College ) တွင်ပင် မိမိအား နိုဘယ်ဆုရရှိစေမည့် သုတေသနလုပ်ငန်းကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ကိုင်နေခဲ့သည်။
သူ၏ ရူပဗေဒနိယာမ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်သည် လျှပ်စစ်သံလိုက်အင်အား (electromagnetic forces) များနှင့် အင်အားနည်း နူးကလီးယားအင်အား (weak nuclear forces) တို့အကြား အခြေခံ စပ်ဆက်တည်ရှိနေမှုကို ဖော်ပြသည်။
ဘို့စ် – အိုင်းစတိုင်းနိယာမ ( Bose-Einstein statistics )
ပိုမိုကြီးမားသည့် particle အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ ခွဲထွက်လာပြီး ၀ ၊ ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ စသည် …. အစဉ်အတိုင်း လည်ပတ်နေသော particle အစိတ်အပိုင်းသေးလေးများဖြစ်နေခြင်းကို Bosons ဟုခေါ်သည်။
Bosons များထဲမှ အင်အားနည်း ဗက်တာ Bosons များကို w – z bosons များဟုခေါ်သည်။ ထို w – z bosons များ၏ အင်အားကြောင့် အင်အားနည်း နူးကလီးယား (weak nuclear forces) တို့သည် ထုတ်လွှတ်ခြင်းခံရကြောင်း (transmit) ကို ဆလာမ်က ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၀ိန်းဘာဂ်နှင့် ဂလက်စဂိုတို့သည်လည်း ထိုဖော်ပြချက်အတိုင်း ဖော်ပြနိုင်ကြပြီး အကြောင်းအကျိုး တင်ပြရာ၌မူ ဆလာမ်၏ တင်ပြချက်နှင့် ကွဲပြားလေသည်။ w – z bosons များတည်ရှိခြင်းကို ၁၉၈၃ တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လေသည်။ ( ရည်ညွှန်း – http://www.britannica.com/EBchecked/topic/518872/Abdus-Salam# )
ဆလာမ်၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွက် အဆုံးစွန်သောအောင်မြင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်သာမက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ နူးကလီးယားဆိုင်ရာ လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ ၊ အာကာသဆိုင်ရာ လေ့လာတွေ့ရှိမှုများအတွက် ထူးကဲသာလွန်သည့် စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေလေသည်။ ( ရည်ညွှန်း –http://en.wikipedia.org/wiki/Abdus_Salam#Legacy )
ဆလာမ်သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွက် အာကာသ အစီအစဉ်တစ်ခုစတင်ရန် အကြံပြုခဲ့ပြီး ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ၊ အာကာသအစီအစဉ် ( space program ) ၏ ပထမဆုံး ဥက္ကဌအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
“The Holy Quran enjoins us to reflect on the verities of Allah’s created laws of nature; however, that our generation has been privileged to glimpseapart of His design isabounty andagrace for which I render thanks withahumble heart.” (Professor Dr. Abdus Salam of Pakistan)
” ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ ဖန်ဆင်းခြင်းနိယာမဥပဒေအမျိုးမျိုးအပြားပြားကို ခံစား သိမြင်လာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေက အလ္လာဟ်အရှင်ရဲ့ ဖန်ဆင်းခြင်းပုံစံထဲက လျှပ်တပြက်လောက်စာကလေးကို သိနားလည်ခွင့်ဆိုတဲ့ ဆုလာဘ်ကောင်းချီး ချီးမြှင့်ပေးသနားခံရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်အနေနဲ့ အရှင်မြတ်အား နှိမ်ချသောနှလုံးသားဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်။ ” (http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1979/salam-bio… ၏ ဆလာမ်အထုပ္ပတ္တိ ဖော်ပြချက်မှ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနေဖြင့် နူးကလီးယားနည်းပညာပိုင်းအတွက် မည်မျှအရေးကြီးနေသည်ကို ဆလာမ်က သိရှိခဲ့သည်။ ဆလာမ်သည် ပါကစ္စတန်နူးကလီးယားအစီအစဉ်၌ အချက်အချာကျသည့် ပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပေသည်။
ပါကစ္စတန်၌ နူးကလီးယားသုတေသန တက္ကသိုလ်တစ်ခု တည်ထောင်ရန် ဆလာမ်အားတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၇၂ တွင် ပါကစ္စတန်အစိုးရက အိန္ဒိယ၏ နူးကလီးယားလက်နက်အစီအစဉ်ကို လေ့လာမိလေသည်။ ထိုမှစ၍ ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် အလီဘူတိုက နူးကလီယားနည်းပညာဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာများပါဝင်သော အဖွဲ့တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းကာ ဆလာမ်အား ကနဦး ဦးဆောင်စေခဲ့သည်။ ဆလာမ်သည် မိမိ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လည်းဖြစ် ၊ နှစ်ရှည်တွဲလာခဲ့သည့် သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သော မစ္စတာ မူနီး အဟ်မဒ်ခန်း နှင့်တွဲ၍ ပါကစ္စတန်နူးကလီးယား အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းကို သတိဝီရိယထားကာ ပြောင်မြောက်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ လေသည်။
၁၉၇၂ ဒီဇင်ဘာတွင် အိုင်စီတီပီ အဖွဲ့ကို ဆလာမ်က ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး နောင် ၅ နှစ်အကြာ ဆလာမ်၏ တပြည့်တဦး ဖြစ်သည့် ရီယာဇွတ်ဒင်း ဦးဆောင်သော် တီပီဂျီအဖွဲ့က နုးကလီးယားလက်နက်၏ သီအိုရီပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံစံကို ဆောင်ရွက်အောင်မြင်ခဲ့လေသည်။
( ရည်ညွှန်း – http://en.wikipedia.org/wiki/Abdus_Salam#Involvement_in_Pakistan.27… )
Become the fan of Prof Dr. Abdus Salam on Facebook –
Tags: Muslim Nobel Prize Winners